Amathiphu Okubalulekile Ukwakhiwa Uhlu Lwe-imeyili Futhi Ukuqalisa Ngokumaketha Oku-inthanethi
Ukuba nohlu lwe-imeyili kukuvumela ukuba uqale ukwenza imali. Konkekuthatha i-imeyili eyodwa ukuncoma umkhiqizo omusha owakhuthazayo, futhi ungaba nayoimali enkulu kakhulu, kodwa kuphela uma uye wakwazi ukwakha uhlu olukhulu. Semalt ochwepheshe bezinhlelo zeDividenti,UMichael Brown wabelane ngezeluleko eziwusizo zokuthi uqalise kanjani ngokuthengiswa kwe-intanethi - how do i find the value of a boat.
Cabanga ukuthi unolwazi olusha olushaumkhiqizo, owuthola awusizo futhi owusizo. I-imeyili elula ethunyelwe kuhlu lwabantu abangu-10 000 abanaloisilinganiso sezingxoxo ezingu-5% singabangela ukuthengisa okungu-500. Ucabanga ukuthi uthola ikhomishini engu-$ 10 ngokudayiswa,okulinganiselwe kakhulu, lokhu kuzokukhokhela u-$ 5,000 ngosuku olulodwa, okungaphansi kukaihora lomsebenzi. Namanje ungaqiniseki ngokukwakha uhlu lwe-imeyili?
Ngokwemvelo, uhlu lwe-imeyili lwama-10,000 luyingayizi ephakathiuhlu, okuzothatha izinyanga ezimbalwa ukwakha, ngakho-ke udinga ukuqala ukusebenza kulo namhlanje, hhayi kusasa. Ingokushesha usuqala ukukwakha uhlu lwakho, okusheshayo ozothola ukuhlala emuva, thumela i-imeyili mayelana nokushaumkhiqizo, futhi uthole okuningi kuleyo hora kunalokho ongayenza ngenyanga.
Izinzuzo Zohlu lwe-imeyili
Izindleko-ukusebenza kahle kokuthengisa ngokuqondile
Amandla okuhlaziya ukuchofozakanye nezinye izibalo ezibalulekile ezikusiza ukuthi ulungise isu lakho le-imeyili
Ukwakhiwa kwamagunya kanye nokwethemba ngokunikela inani ngaphezu kwesikhathi
ukuguqulwa okuphezulu ngenxaekwakheni ukuxhumana okuqhubekayo nohlu lwakho lwe-imeyili
Enye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zokwakha i-imeyiliuhlu lubamba ababhalisile bakho. Kuvame kakhulu kubafundi be-savvy ukubhalisela "inzuzo" yabo yamahhala "bese uzisusa ohlwini lwakho lwe-imeyili ngemuva kwalokho. Udinga ukukwazi ukuhlinzeka ngenani kubongokuqhubekayo kulo lonke i-imeyili yakho yokushintshanisa, ngaphandle kwalokho, tshela umsebenzi wakho onzima kanye nezinzuzo zesikhathi esizayo ..
Imikhankaso yokuthengisa ye-imeyili esebenzayo isho konkeindlela efanele. Cabanga ngama-imeyili owuthola nsuku zonke nokuthi kungani abanye babo bebambaukunakwa nezinye kwasuswa. Kukhona isayensi yokuthola ababhalisile intshisekelo nokwethemba ngokusebenzisa aimeyili elula. Lona umehluko phakathi "ugaxekile" owamukelayo nama-imeyili ochofoza kuwo ukuze uthole okwengeziwe ngawo.
Amaphuzu Asemqoka Okufanele Awakhumbule Lapho Ukwakha Uhlu Lwakho
Yakha ukwethenjwa ngokunikeza ubuchwepheshe kanye nenani ku-niche yakho ye-target
Yenza imizwelo yaboukudala izindaba abafundi abazithokozelayo
Yenza isipele indaba yakho ngelogi yangempela njengayeubufakazi bokuzithola zibe nesithakazelo nakakhulu
Kubalulekile ukukhuluma ngokuqondile kubhalisile bakho.Uyazi ukuthi kungani babhalisile, ngakho khuluma nabo ngendlela ezobheka. Akekho othanda i-imeyiliokuyinto ekhuluma ngamaphuzu angabalulekile, ngakho-ke uye endaweni yakho ngokushesha futhi ngqo. Bese ubatshele indaba abakuyozingahlobene. Lokhu kuzokwenza ukuthi imizwelo ifike phezulu, yilokho okufunayo.
Indlela engcono kakhulu yokwakha uhlu lwe-imeyili ukusebenzisa i-aumphenduli wemoto ohloniphekile. Ungasetha ama-imeyili azenzekelayo aphelelwe amaviki esikhathini esizayo, futhi uma sekukwenzile,akudingeki wenze noma yini. Kunezinketho eziningi, kodwa i-Aweber ibonakala iyona ethandwa kakhulu. Laphokuyisisusa sokuthola okunye okukhululekile noma okushibhile kodwa inkinga ngelokho ama-imeyili akho angancishiswakuya kwesonto ngesonto, noma bazophela ebhokisini lakho logaxekile.
Imigqa yesifundo se-imeyli kufanele ingavinjelwefuthi uthole ngcono ukulangazela komuntu wonke. Ukukhuluma ngezindaba kubalulekile ukubamba izingqondo zabo bese uzibeka esihlokweni sakhoyokucabanga. Ukufunda okuningi mayelana nokukopisha kuzokusiza ukuthi ukhiphe ama-imeyili abalulekile athola abafundi bakho ukufunda nokufunayo.
Khumbula ukwakha ukwethemba ngehlu lakho le-imeyili ngaphambiliuqala ukufaka imikhiqizo nokufuna ukuthengisa. Isiphathimandla sivela ngokuzethemba, futhi yilokho okukuvumela ukuba wenze ukuthengisa esikhathini esizayo.
Qiniseka ukuthi utshela umfundi ukuthi yini okumelwe uyenze. Itkungase kuzwakale kuphikisana, kepha izifundo zifakazele ukuthi ukutshela umuntu ukuthi enze okuthile kuthola impendulo engcono kunaleyoubacele ukuba benze okuthile. "Bhalisa manje nge-coaching 1-on-1" kuzosebenza kangcono kunokuthi "Ungathanda ukubhalisela i-coaching 1-on-1?".
Ngethemba ukuthi lesi sihloko sizokusiza ukuba ufundeinto noma amabili mayelana nokwakha uhlu lwe-imeyili. Into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi awukwazi ukulinda ukuze uqalise. Kuyintokubaluleke kakhulu ukuthi uqalise kulo msebenzi ngokushesha. Uma unanqikazi, bhekani ku Semalt Izinsizakalo Zedivayisi Yezinombolongakho sizokwenza izinto zicacile kuwe.